JustControl.it: Aaladda ototatiga Xogta Uruurinta Kanaallada oo dhan | Martech Zone
Suuqgeynta dhijitaalka ah waxaa horseed u ah baahi loo qabo habeyn ballaaran: ilaha xogta cusub, isku-darka cusub ee iskaashiga, heerarka weligood is beddelaya, xaaladaha casriga ah ee UA, iwm. granular.
Taasi waa sababta xirfadleyda guuleysta iyo kuwa hamiga leh ay ugu baahan yihiin marsiin shaqeynaysa si ay ula tacaalaan xaaladaha murugsan iyo sawirrada adag. Si kastaba ha noqotee, qalab badan oo jira ayaa wali bixiya qaab 'hal-cabbir-dhan ah' oo duugoobay. Qaab dhismeedkan koowaad, dhammaan xaaladaha suuqgeynta suurtagalka ah ayaa horay loo sii cayimay bilowgiiba, iyada oo aan fursad loo helin in lagu daboolo shuruudaha shaqsi ahaan gebi ahaanba. Isla mar ahaantaana, sheydaanku had iyo jeer wuxuu ku jiraa faahfaahinta.
Si la mid ah, suuqa maanta wuxuu u baahan yahay sanduuqyada aaladda halkii loo baahnaan lahaa qalabka, si macaamiisha ay u abuuri karaan sharciyadooda, socodka xogta, qiyaasaha, iwm.
JustControl.it, xal cusub oo loogu talagalay falanqaynta xogta horumarsan, ayaa ah isku day lagu buuxinayo farqigan. Qeybtaan, dulmar kooban oo ku saabsan sanduuqan qalab ee cusub ee loogu talagalay suuq-geynta dijitaalka. Si loo muujiyo kartida buuxda ee JustControl.it, qodobkani wuxuu soo bandhigayaa dhowr tusaale oo wax ku ool ah oo ku saabsan sida loo helo, loo socodsiiyo, loona beddelo xogta.
Dulmarka Waxsoosaarka JustControl.it
JustControl.it waxaa si rasmi ah loogu taaganyahay xal u sahlaya ganacsiyada inay si buuxda gacanta ugu dhigaan qarash gareynta xayeysiinta, qiimeeyaan waxqabadka ololaha guud ahaan wadiiqooyinka kala duwan ee cajiibka ah, ayna soo saaraan warbixinno waqtiyaysan oo caadiyan loo sameeyay Sidan oo kale, waxay ballanqaadeysaa mashiinka ETL ee wax ku oolka ah iyo awoodaha otomatiga ee khariidaynta xogta iyada oo ku saleysan ilo fara badan oo ku jira hal UI
Waqtigan xaadirka ah kooxda JustControl.it waxay sheegaysaa in qiyaastii 30 ilo xog ah isla markiiba lala xiriirin karo macaamiishooda.
Isla mar ahaantaana, ciyaaryahanka cusub wuxuu ku nuuxnuuxsaday inay si fudud u kicin karto ilo xog kasta oo dalab ah. 'Wareegtada' hadda 'waxaa qaabeeyay oo qeexay macmiisheeda. Haddii baahi loo qabo in la isku xiro mid cusub ay soo baxdo, waxay ku xirnaan doontaa lacag la'aan. Safarka caadiga ah ee macaamiisha iyo geeddi-socodka dusha, sida uu sheegayo JustControl.it, wuxuu u egyahay sidan.
Mar haddii kal-fadhiga demo la dhiibo, kooxda JustControl.it waxay macmiil weydiisaneysaa inay soo buuxiso qoraal kooban si ay u daboosho dhammaan faahfaahinta tusaalaha xogta tusaalaha ah ayna ku xirmaan ilaha ay khuseyso akoonkooda JustControl.it
Intaa ka dib, tusaale muunad ah - oo leh dhammaan faahfaahinta la xidhiidha - ayaa la dejiyay oo la waafajiyay.
Marka seenyada la hagaajiyo, warbixin la sameeyay ayaa la soo saaray. Natiijooyinkeeda ayaa markaa lagu xaqiijinayaa tirooyinka macaamiisha.
Ugu dambeyntiina, inta ka hartay xaaladaha ayaa la hirgeliyaa.
JustControl.it ayaa lasii daayay waqti aan sidaa usii fogeyn. Taasi waa sababta aan dib u eegisyo badan oo dadweyne ah loo daabicin illaa iyo hadda. Isla mar ahaantaana, waxaa jira horeba qaar ka mid ah wanaagsan jawaab celin ayaa laga heli karaa. Shirkaduhu waxay qeexayaan isku halaynta warbixinnada xogta ceyriinka ah, awoodaha habeynta ballaaran ee la xiriira ka shaqeynta xogta iyo khariidaynta, iyo sidoo kale habboonaanta.
Waxay noqon laheyd mid xiiso leh in la fiiriyo sida JustControl.it ay ugu qalantay dib u eegistaas wanaagsan.
JustControl.it Awoodaha Xogta
Sida laga soo xigtay kooxda JustControl.it, xalkooda awood uma laha oo kaliya soo saarida xogta ceyriinka 'sida ay tahay', laakiin sidoo kale waxyaabo kale.
Ugu horreyntii, sanduuqa qalabku wuxuu soo saaraa xog cayriin. Magacyada ololaha, astaamaha loogu talagalay dalalka, maareeyayaasha, iyo astaamaha ayaa lagu aqoonsan karaa. Waxaa lagu andacooday in, la JustControl.it, ma jiraan wax xayiraad ah oo ku saabsan nooc gaar ah oo olole ah. Qadar aan xad lahayn oo ah cabbirada caadooyinka iyo miirayaasha iyaga ayaa loo ballanqaaday, iyo sidoo kale tiro aan xadidnayn oo tiirar ah, labadaba waa la xisaabiyaa KPIs iyo metrik. Soosaarida metadata sidoo kale waxay noqotay mid dhab ah.
Intaa ka dib, xogta waxaa sifeeya maareeyayaasha, barnaamijyada, maareeyayaasha, iwm.
Marxaladda seddexaad, macluumaadka laxiriirta faa iidada ee laga helayo raadraacayaasha iyo / ama xalalka gudaha ee BI ayaa lagu dari karaa iskuna dari karaa.
Marka xogta noocaas ah lagu daro, macluumaadka laxiriira ilaha iyo xogta 'tags' kale ayaa lagu dari karaa.
Ugu dambeyntiina, miirayaasha waddammada iyo barnaamijyada ku jira dhammaan ilaha isku xiran ayaa la dejiyaa. Natiijo ahaan, hal sawir oo ku saleysan qaybo kala duwan oo xog ah ayaa la abuuray. Taasi waa in la yiraahdo, warbixin loo baahan yahay go'aan qaadasho ayaa la soo saari karaa.
Marka loo eego muuqaalka iyo dareenka xalka, tusaalooyinka soo socda ayaa la soo bandhigi karaa.
Dashboard guud oo leh macluumaad kala duwan oo macquul ah:
Dashboard guud oo leh xulasho cabbir xogta xaddidan:
Dashboard guud oo leh muunad miirayaal qaas ah oo la adeegsaday
JustControl.it wuxuu iftiiminayaa in kartida u gaarka ah ee awoodaha kor lagu soo sheegay ay dhab ahaantii xad lahayn. Qaybta soo socota, waxaad arki kartaa nooca qorshahan u suurta gelinaya awooddan aan xad lahayn.
JustControl.it Dejinta Tusaale Muunad ah
Kiiskani wuxuu ku saleysan yahay waxqabadyo ay sameysay wakaaladda wax iibsiga warbaahinta iyadoo adeegsaneysa qiyaastii 40 ilo, oo ay ka mid yihiin AppsFlyer tracker iyo shabakadaha. JustControl.it waxay gacanta ku abuurtay laba warbixinood oo daboolaya baahida macaamiisha.
Warbixinta ugu horeysa waa natiijada socodsiinta howshan xog ficil ahaan: xog ururin la aruuriyey oo laxiriirta qarash gareynta xayeysiinta meelkasta oo la adeegsan karo. Waxay ku shaqeysaa dhammaan xogta dhammaanteed iyada oo la tixgelinayo hantideeda iyada oo tixgelinaysa (sida kooxaha la xiriira illaa iibsadayaasha shakhsiyaadka, kanaalada, iwm.).
Warbixinta labaad waxay ujeedadeedu tahay inay bixiso sawir aan la macaamili doonin xogta ceyriinka ah, laakiin leh qiyaaso la xisaabiyay - kuwa lagu xisaabinayo barta isla markaana ku saleysan qaaciidooyinka la beddeli karo. Qiyaasta dhabta ah ee qiyaasta waxaa ka mid ah cabirrada soo socda.
Si loo suurtogaliyo, kooxda JustControl.it waxay abuurtay taxane gaar ah oo ficilada hoos ka muuqda.
Waxaa xusid mudan inay tahay JustControl.it kooxda taageerada in dhisto socodsiinta xogtan. Si kastaba ha noqotee, bixiyaha xalka wuxuu u maleynayaa in, wax yar kadib, awoodan ay heli doonaan macaamiisha si ay iyagu iskood ugu dhisi karaan.
Hadda, tijaabo bilaash ah oo bil ah ayaa la heli karaa. Wakaaladaha dhijitaalka ah iyo horumariyeyaasha barnaamijku waxay dalban karaan demo oo iskood ayey ugu tijaabin karaan JustControl.it. Macaamiisha badan ee JustControl.it ayaa leh, ilaha badan ee ay ku biiri doonaan isticmaalka degdegga ah.
Isku-darka ilaha macluumaadka hadda waxaa ka mid ah Google, Facebook Ads, TikTok, CSV, Excel, YouAppi, AD Colony, adcash, Adperio, ADSKEEPER, Adsterra Network, Affise, AppSamurai, APPLIFT, appnext, AppsFlyer, hagaaji, BeaverAds, Chartboost, Clickadu, EngageYa, ExoClick, Fyber, IronSource, Liftoff, mgid, VK, Yandex Direct, MyTarget, PropellerAds, Remerge, Revcontent, RichPush, Snapchat, Tapjoy, UNGADS, midnimada ADS, Vungle, Mintegral, iyo Zeropark.
Tags: AD gumeysicadcadla qabsadoAdperioU -ADEEGEShabakada AdsterraShabakadda Adsterra_networkXaqiijiApp-ka SamuraiCODSADxirmoBarnaamijyada XayeysiiskaAppSamuraiappsflyerdhacafalanqaynta sifoBeaverAdsChartBoostClickaduku xirnaanshaha kanaalkaCSVKa qaybgalsareexoclckexoClickFacebookxayeysiiska facebookFybergoogleXadhig_IisishaSourcejustcontrol.waakor u qaadmgidisku dhafanmyTargetDacaayadIsku kariRevcontentRichPushsnapchatTaabashoTikTokTwitterUNGADSmidnimada ADSmidnimoADSvkVoluumVungleYandexYandex DirectYouAppiZeropark